စိတ်ပါလာရင် အံကျိတ်ခံတယ် | CeleTrend
August 1, 2020 CeleTrend Love Book 0
““ အိုး ”” ဆက်ခနဲ ရုန်းပြီး ထွက်ပြေးမလို လုပ်တဲ့ ချိုချိုရဲ့ ခါးသိမ်ကလေးကို လှမ်းဖက်ပြီး ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်ပါတယ်။ ရှင်မတောင် သနပ်ခါးနံ့သင်းနေတဲ့ ပါးနှစ်ဘက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်မွှေးပစ်လိုက်တယ် ထိတ်လန့်ပြီး ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့ နှုတ်ခပ်းလေးကို ငုံပြီးစုပ်ယူလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခါတည်း ကော့တက်ပြီး လက်ထဲက စာအုပ်ပါလွှတ်ချလိုက်ပါတယ် တစ်ခါမှ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ အပျိုစင်လေးပဲ။ ကျွန်တော်လွှတ်ချလိုက်တဲ့ ခြင်းတောင်းဟာ တစ်လိမ့်လိမ့်နဲ့ အတော်ဝေးဝေးကို ရောက်သွားပါတယ် မြေပြင်ကို မျက်စိကစားကြည့်တော့ မြက်ခြောက်တွေနဲ့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ် အားမှ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပွဲစား လာအုံးမှ အခုတော့။ကော့ကော့လေးဖြစ်နေတဲ့ ချိုချိုကိုမျက်ခင်းပေါ် အသာပက်လက်လှဲချပေးလိုက်ပါတယ် လရောင်အောက်မှာ မျက်စိမှိတ်အိပ်နေတာ နတ်သမီးလေးကျနေတာပဲ မျက်နှာပေါ် စာအုပ်မိုးပြီး နမ်းရင်းလက်တစ်ဖက်က ရင်စိအင်္ကျီလေးရဲ့ နှိပ်ကြယ်သီးတွေကိုတစ်လုံးချင်းဖြုတ်နေတယ်။
အင်္ကျီကျွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ လရောင်ကြောင့်လား မသိဘူး။ ကျောက်ဆစ်ရုပ်လေးလို ဖွေးနေတဲ့ သူ့ရင်ဘတ်နဲ့ ဗိုက်သားပြင်ဟာထင်းကနဲပေါ်လာပါတော့တယ်။ ““ ကိုကျော်ဝင်းမောင် ချိုကြောက်တယ် သွားပါရစေ ရှင့်ကိုလဲ ကျမသိတာမဟုတ်ဘူး ရှင်အနိုင်မကျင့်ပါနဲ့ ”” ““ အကိုက အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုပါလား ကိစ်္စမရှိဘူး မင်းအမြင်မှန်ရလာအောင် ဘယ်သူကအနိုင်ကျင့်တယ် ဘယ်သူကအလိုတူအလိုပါဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိအောင်နို့စို့ပေးအုံးမှပဲ။”” ကျောနောက်ကို လက်ထည့်ပြီး ဘော်လီချိတ်တွေဖြုတ်ချလိုက်တယ် အမယ်မယ် သူက လက်ကိုကျောနဲ့ဖိထားသေးတယ် ဘယ်ရမလဲ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကိုတောင် ဒီကကောင်က လက်တစ်ဖက်နဲ့ မ ပြလိုက်မယ်။ ဘော်လီပြုတ်သွားတာနဲ့ အရှေ့ရင်ကို လွမ်းထားတဲ့အကာကို လှပ်ပစ်လိုက်တယ်။
အိုး ခင်များတို့မြင်စေစမ်းချင်တယ်ဗျာ။ တကယ်တကယ် လိမေ်္မ်ာသီးထိပ်မှာ အသီးတံအတွက် စူစူလေးဖြစ်နေသလိုပါပဲ။ သူ့နို့သီးလေးရဲ့ ထိပ်မှာလဲ ခပ်စူစူလေး ကပ်ပြီးမို့နေတယ် နို့သီးမဟုတ်ဘူးနော် နို့သီးကို ကျွန်တော်ထပ်ပြီးလုပ်ပြမယ် ကြည့်နေ။ အခုတော့ကောင်မလေးဟာငြိမ်နေလေရဲ့ နို့အုံတစ်ခုကို အသာငုံပြီး စုပ်ယူလိုက်ပါတယ် တဟင်းဟင်းနဲ့ရှက်လဲရှက် အရသာလဲတွေ့နဲ့ အတော့ကို အကြပ်ရိုတ်နေပုံပဲ။နို့အုံရဲ့ နို့သီးထွက်လာမယ့်ထိပ်ကို လျှာနဲ့ မနားတမ်း ကော်ပတ်တိုက်ပေးလိုက်တယ်။ ခြေမှာကွေ့ကောက်နေပြီး ကျန်နို့အုံတစ်ခုကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးပွတ်နေလေရဲ့။ အရမ်းဖီးတက်နေပြီကိုး။ဒီတစ်ဖက်နို့အုံကိုစို့ရတာအားရတော့ ဟိုဘက်ကိုသွားစို့ရပါတယ် ကောင်းတယ်ဗျာ။ သူလဲကောင်း ကျွန်တော်လဲကောင်း။ ဖြစ်နိုင်ရင် အခမဲ့ နို့စို့ကုမ်္ပဏီတစ်ခုတောင် ထောင်လိုက်ချင်တယ်။ ခင်ဗျားတို့က ရှယ်ယာဝင်တွေပေါ့ ကျွန်တော်က ဒိုင်ခံစို့မ.။ နို့သီးနှစ်လုံးဟာ ဖောင်းလာပြီး နို့အုံတွေဟာလဲ တင်းမာလာပါတယ်။ နွားမတစ်ကောင်နို့ပြည့်လာသလိုပေါ့။ သူကတော့ တဏှာသွေးတွေနဲ့ ပြည့်ပြီး နို့အုံဖောင်းလာတာပေါ့။ နို့စို့ ခဏရပ်ပြီး သူ့ကို အခြေအနေကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တ်ာလည်း အတန်ကြာ မလှုပ်ရှားတော့ အသာမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်လေ။ ကျွန်တော်လည်းကြည့်နေမှန်းသိရော နို့တွေကို လက်နဲ့ပိုက်ပြီး ရှက်စနိုးနဲ့ အုပ်သွားတယ်။
သြော်.. မိန်းမ.. ။ သူ့မျက်နှာလေးကို ပြန်ပြီးဆွဲလှည့်လိုက်ပါတယ်။ ““ ကောင်းလား.. ကောင်းလား.. နို့စို့တာကောင်းလားဟင်.. ”” ဘာသံမှထွက်မလာဘာဘူး။ ““ အေးနေရင်တော့ စကားပြောအောင်လုပ်ရမှာပဲ ပထမအော်ရမယ် နောက်တော့ စကားပြောလာရမယ် နို့စို့တာကောင်းလား မကောင်းလားမေးနေတာကို မဖြေဘူး မကောင်းဘူးဆို နောက်မစို့တော့ဘူး။”” အဲ့ဒီလို ခပ်ထန်ထန်ပြောတော့လည်း မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ သနားစရာပါပဲ။ “ ဘာတွေလာမေးနေမှန်းမသိဘူး ”” ဟုတ်သားပဲ ကျွန်တော် လောသွားတယ် သူ့ခါးက ထဘီကို အသာဖြေချလိုက်တယ် ပြီးတော့ မချွတ်ေးပဲ ထဘီပေါ်က စောက်ဖုတ်ကို လက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးပွတ်ပေးနေရတယ် ဗြုံးခနဲ ချွတ်ချရင် ရှက်သွားရော တော်တော်လေးကြာအောင်လဲ ပွတ်ပေးပြီးရော ခေါင်းလေးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ထလာပါတော့တယ်။
စပ်စပိုင်ဒါဝတ်လေ့ရှိဟန်မတူဘူး ထဘီကို အသာရှောချလိုက်ပါတယ်။ အိုး လှလိုက်တာဗျာ။ တကယ်ပါပဲ ခင်ဗျားတို့လဲ ဒီလိုမျိုးတွေ့ဘူးဖြစ်မှာပါ။ ဖာသည်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖုတ်ဟာ ရမက်ဇောတွေထန်လာအောင် နှိုးဆွချင် နှိုးဆွနိုင်မယ် .. ဒီလို ပစ်္စည်းသန့်သန့်လေးတွေလိုတော့ စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဖူး။ .. အခုလဲကြည့်လေ အပျိုစင်တစ်ယောက်ရဲ့အဖုတ်ကို အနီးကပ်မြင်ခွင့်ရတဲ့ ကျွန်တော်တစ်ယောက် အသက်ရှုမှားသွားတာအပြစ်လား။စောက်ဖုတ်လေးကို တရှုံ့ရှုံ့နဲ့ ယုယုယယနမ်းတော့ ထိတ်လန့်ခြင်း ရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ဟာ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ ထင်ဟပ်လာပါတယ်။ အရိုင်းပေကိုး။ စောက်ဖုတ်ရဲ့ စေးကပ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးနှစ်လွှာကို လူမိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ စိုရွှန်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းရဲရဲလေးလို သဘောထားပြီး စုပ်နမ်းလိုက်ပါတယ်။ နဲနဲတော့ညှီတာပေါ့ဗျာ။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ အပျိုစင်ကို လိုးချင်ရင်တော့ ဒီလောက်တော့ ခံနိုင်ရမှာပေါ့။ ရေချိုးခန်းနဲ့ အကျအနမချိုးနိုင်တဲ့ လူတွေဆိုတော့လည်း ဒီလောက် အနံ့ရှိတာ အဆိုးမဆိုသာပါဘူး။ တစ်ချို့ဆို နာမည်ကြီးဆပ်ပြာတွေသုံးရဲ့နဲ့တောင် စောက်ဖုတ်က ပုတ်နေတယ်။ အလိုဗျာ ရေးရင်းနဲ့ ဘယ်တွေလျှောက်ရောက်သွားမှန်းမသိပါဘူး။ အကွဲကြောင်းလေး တစ်လျှောက် လျှာကလေးနဲ့ မျဉ်းဆွဲပေးလိုက်မိတယ်။
အခုနက ရှက်နေတဲ့ ကောင်မလေးဟာ ပေါင်ကို အတင်းဖြဲပြီး ဖင်ကြီးကော့တက်လာပါလေရော ဗျာ။ အခုနက ခြောက်လို့ ကပ်စီးစီးဖြစ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးနှစ်လွှာဟာ အခုတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေါ် စီမံကိန်းအရ ကျွန်တော့တံတွေါ်တွေနဲ့ ချွဲပြီး အလွယ်တကူ လျှာဟာ အထဲဝင်နိုင်ပါတော့တယ်။ အိုးကောင်းလိုက်တာဗျာ လျှာလကာရည်အိုးထဲ လျှာထဲ့လျက်ရသလိုပါဘဲ အနံ့ကလည်း တစ်မျိုး အရသာကလည်းတစ်မျိုး မဆိုးပါဘူး။ လျှာကလေးဟာ ဟိုထိုး ဒီထိုးနဲ့ နောက်ဆုံး သူ့ရဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ စောက်စေ့ကို သွားပွတ်တိုက်လိုက်မိပါတယ်။ စာက်စေ့လေးဟာ ပျော့အိနူးညံနေပြီး အဆီခဲလေးလို အစ်နေသဗျာ လျှာဖျားလေးနဲ့ ဟိုထိုးဒီထိုးလုပ်လိုက် ဖိပြီးပွတိဆွဲလိုက်နဲ့ နည်းမျိုစုံသုံးပြီး ဆွပေးလိုက်တာ တစ်ခါတည်း စောက်စေ့ဟာတောင်လာပါလေရော။သူရဲ့ စောက်ဖုတ်ဟာပြောင်းလဲမှုတွေကို ခံစားရပြီး အံ့သြနေပုံရတဲ့ ကောင်မလေးဟာ သူ့စောက်ဖုတ်ကို သေချာစွာ ငုံ့ကြည့်နေပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ အပျိုစင်မို့ နဲနဲဆွပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သွေးကြောထဲက သွေးတွေဟာ အက်ဆစ်တွေဖြစ်သွားရောပေါ့။ အခုစောက်ခေါင်းထဲမှာ ဆိုးသွမ်းတဲ့ မြွေတစ်ကောင်လို အငြိမ်မနေတတ်တဲ့လျှာနဲ့တွေ့တော့ ရမက်မီးဟုန်းကနဲ တောက်ပြီးသွေးကြောထဲက အက်ဆစ်တွေကို ပွတ်ပွတ်ဆူစေပြီပေါ့။ ချိုချိုရဲ့ ပါးစပ်ကနေ တရှီးရှီးနဲ့ ငရုပ်သီးစပ်သလို အသံတွေထွက်နေပါတယ်။
ပေါင်တံကြီးဖြဲဟပြီး ပြဲသထက်ပြဲပြီး ပန်းနုရောင် စောက်ဖုတ်လေးကို အခုဏက စိတ်သိပ်မပါပေမယ့် အခုတော့ နှာခေါင်းရော မေးစေ့ပါ စောက်ဖုတ်ထဲမြုပ်ပြီး လျှာကို အတွင်းခေါင်းထဲရောက်အောင် အတင်းထိုးသွင်းပြီး လျှာရဲ့ အရသာစုလေးတွေနဲ့ စောက်ခေါင်းချောချောလေးကို လှည့်ပြီး ယက်ပေးနေမိတယ် ။ ကောင်မလေးဟာ ကျွန်တော့်ကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲကို ဖိပေးပြန်ပါတယ်။ စောက်ခေါင်းလေးဟာလဲ တရွရွနဲ့ လျှာကိုပြန်ပြီး ဆုပ်နယ်ပေးနေပြီး စောက်စေ့လေးဟာ နှုတ်ခမ်း ငုတ်တိုလေးတွေကြောင့် ဖရုံစေ့တစ်စေ့လို တောင်မတ်နေပါတော့တယ်။ ““ အား.. အား. အမေး.. အင့်.. အင့် ”” ဟုတ်ပါရဲ့ တတ်ဆိတ်နေတဲ့ညကို ဖောက်ထွင်းပြီးတော့ ကောင်မလေးရဲ့ အသံတုန်တုန်လေးဟာ လှိုက်မောစရာပေါ် ထွက်လာပါတယ်။
ပြီးသွားပြီလေ..။ စောက်ခေါင်းထဲက အရည်တွေဟာ လေခိုနေတဲ့ မီးသတ်ပိုက်ကကျလာသလို. ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ အံကျလာပါတော့တယ်။ ဖင်ဟာမြေပြင်ကနေ တစ်ထွာလောက်ကော့တက်ပြီး ဘေးကမြက်ပင်တွေကို ပြတ်ထွက်သွားအောင်ဆုပ်ကိုင်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ မေးစေ့မှာလဲ သူ့ရဲ့သုတ်ရည်တွေပေပွလို့ပေါ့ ပါးစပ်ထဲဝင်လာတာတွေကိုတော့ မထွေးထုတ်ပါဘူး။ မျိုချလိုက်တယ်။ စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်တွေဟာ လရောင်ကြည်ရောင်တွေကြောင့် ငွေရောင်အဆင်းတောက်ပြီး ငွေရည်တွေလို စောက်ဖုတ်မှာ တွဲလောင်းခိုနေတယ်ဗျာ။ သိပ်ကြည့်ကောင်းတာပဲ။ကင်မရာသာရှိရင် ဓါတ်ပုံရိုတ်ထားတယ်။ အခုတော့ ပက်လက်ကလေးငြိမ်နေတာ အသက်ကင်းမဲ့နေသလိုပါပဲလား။ ကောင်မလေးကို အသာခြေနှစ်ချောင်းက ကိုင်ပြီး အခုနက သူဝတ်ထားတဲ့အ၀တ်အစားတွေ တင်ထားတဲ့သစ်မြစ်ခုံးခုံးကြီးပေါ်မှာ ခါးကို တင်လိုက်ပါတယ်။
နောက်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကို သစ်ပင်ခြေရင်းမှာ လှမ်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုတော့မြက်ခင်းပေါ်မှာပဲ ဖြဲထားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော့်လီးကြီးဟာလဲ ကိုက်ခဲနေလောက်အောင် မာတောင်နေပါတယ်။ လီးထဲက အကြောတွေဟာ အရည်ပြားကို ဖောက်ထွက်ပြီး ခုန်နေရဲ့။ ခရမ်းရောင် လက်နေတဲ့ ဒစ်ထိပ်ကို ချွဲကျိနေတဲ့ စောက်ခေါင်းထဲမှာ နှစ်ပြီး အသာမွှေပေးနေတယ်။ကောင်မလေးက သိရောပေါ့။ လိုးတော့မယ်လို့။ အရည်ကြည်လေးတွေစို့လာပြန်ရော။ တွန့်လိမ်နေတဲ့ စောက်ခေါင်းကို အသာလက်နဲ့ဟပြီး လီးဒစ်ကိုတေ့ပြီးတော့ အသာသွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်နဲ့ ဆွပေးနေပါတယ် ။
ကောင်းလဲကောင်းတဲ့ အရသာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြောပေါင်းတစ်ထောင်ဆိမ့်သွားအောင်လို့ သူ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးဟာနူးညံ့လှပါတယ်။ သူလဲကျွန်တော့်ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ဒစ်ဖျားကြောင့် အရသာတွေ့နေပုံပါပဲ။ စောက်စေ့ကလေးဟာ တဆတ်ဆတ်နဲ့ စောက်ပတ်ကလေးဟာ တရွရွနဲ့ ပါးစပ်ထဲက တဟင်းဟင်းနဲ့ ကောင်မလေးဟာ အင်မတန် အလိုးခံချင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ လီးကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲမှာ သွတ်သွင်းထားချင်နေပုံပဲ။ လီးကိုနဲနဲဖိသွင်းလိုက်ပါတယ် အင့်ကနဲ အသံထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီနားမှာ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ပြီး တရွေ့ရွေ့နဲ့ဝင်လာလိုက်တာ အပျိုစင်မှေးကိုသွားထောက်မိပါလေရော ကောင်မလေးလဲ လီးဝင်တဲ့ တလျှောက်လုံး တကျွတ်ကျွတ်နဲ့ စုပ်တသပ်သပ်နဲ့ပေါ့။ အပျိုစင်မှေးကို အသာဖိလိုက် ပြန်နှုတ်လိုက် လုပ်နေတော့ ကျင့်သားရသွားပုံပဲ ငြိမ်သွားလေရဲ့ ။ ကော့တက်နေတဲ့ ခါးနှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့စုံကိုင်ပြီး အပျိုစင်မှေးကို မာတောင်နေတဲ့ လီးကြီးနဲ့ ဖိထောက်ချလိုက်တော့ပါတယ်။
ပြွတ်.. ဗြစ်.. ဖောက်ဒုတ်အင့်.. အင်း.. အမေ့. အား.. သေပါပြီ. အမေ့ရဲ့”” ဟုတ်ကဲ့ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ ခင်ဗျားတို့လဲလန့်မသွားနဲ့အုံး လူသတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ပန်းဆွတ်နေတာ။ ကောင်မလေးရဲ့အသံဟာ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဓားနဲ့ထိုးလိုက်သလိုပဲ။ စူးရှပြီး ငှက်ဆိုးတောင် လိပ်ပြာလန့်သွားနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ထန်နေပြီမို့ သိပ်မမှုပါဘူး။ ဗြစ်ဗြွတ် ပြွတ် ဒုတ်အင့် အီးဟီး ဟီးဟီး ဒုတ် အား ဒုတ် အိုးအိုးဟီး အင့် အင့် ဒုတ်အား ဟင်းဟင်းဟင့် ”” ကောင်မလေးဟာ ကြောက်သွားပုံပဲငိုရှိုတ်ရင်း အလိုးခံနေရရှာတယ်။ စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းနုနုလေးဆီမှာ လီးကြီးဟာ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာလို သဘောထားပြီး ၀င်ချင်သလိုဝင် ထွက်ချင်သလိုထွက် နေပါတယ်။ သွးတွေကတော့ရဲနေတာပဲ ငရုတ်သီးထုပ်ပေါက်သွားသလား အောက့်မေ့ရတယ်။ အတော်ကြာကြာလဲလိုးပြီးရော သူ့ရဲ့အပျိုစင်မှေးလေးဟာ လီးရဲ့ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ကြောင့် လိပ်ပြီး ပြတ်ထွက်သွားတယ် လီးအထုတ်မှာ အပြင်ကိုပါလာပြီး သွေးတွေနဲ့ရောလို့ ရော်ဘာပြားတစ်ပြားလိုပါပဲ လိပ်ပြီး စောက်ဖုတ်မှာ ကပ်နေတယ်။
ကောင်မလေးကတော့ ငြိမ်သွားပြီး ကောင်းလာတယ်ထင်ပါရဲ့ ကောင်းရမယ်လေ။ ဒီအရသာဟာ ဘယ်သူများတောင့်ခံနိုင်လို့လဲ။ လီးကသာ မှန်မှန်ကြီးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ အလုပ်များနေတာ။ ““ ဟော”” ဘာမှကြာလိုက်တယ် မထင်ရဘူး။ ကောင်မလေး စောက်ဖုတ် အခေါင်းဟာကျွန်တော်လီးကို အတင်းဆွဲဆုတ်ပြီး မလွတ်တမ်း ညှစ်ထားလိုက်ပါတယ်။ လီးထိပ်မှာတော့ ရေနွေးလို ပူနွေးတဲ့ အရာတွေ လာထိလို့ကောင်မလေးပြီးသွားမှန်း သိရတယ်။စုပ်ထားရက်နဲ့ပဲ ရအောင်ဆောင့်ပေးလိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်း ကြာကြာမခံနိုင်တော့ဘူး လီးတင်မက တစ်ကိုယ်လုံး တင်းခနဲဖြစ်သွားပြီး သုတ်ရည်တွေကို စောက်ခေါင်းထဲကလျှံကျအောင် သားအိမ်ကို ပန်းချလိုက်ပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတာပဲဗျာ။သိပ်ကောင်းတာပဲ။ အပျိုကိုလိုးရတာ ဘာနဲ့မှ မတူဘူး။ ကောင်မလေးငြိမ်ကျသွားသလို ကျွန်တော်လည်းသူ့ကို အသာပက်လက်အနေအထားဖြစ်အောင်ထားပြီး သူ့ဘေးမှာ ၀င်ထိုင်လှဲရင်း နို့သီးတွေကိုဆုပ်ချေရင်း အမောဖြေနေရပါတယ်။ ““ ကျမပြန်ရတော့မယ် ဖယ်ပေးအုံး ”” အရှက် အကြောက်တို့နဲ့ ရောပြီး တုန်ယင်နေတဲ့ အသံနဲ့ ကောင်မလေးက ကျွန်တော့်ကို ရှိုက်ပြီးပြောပါတယ်။
““ အိုး ကိုယ်ပို့ပေးမှာပေါ့ ချိုလေးရယ် အ၀တ်အစားလဲ ဖြေးဖြေးထ ကိုယ့်ကိုကိုင်ထား။ ”” မတ်တပ်ထအရပ်မှာ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ အိုင်နေတဲ့ သွေးနဲ့သုတ်ရည်တွေဟာ ဝေါကနဲ ကျလာပါရောဗျာ။ ကောင်မလေးပိုလန့်သွားတယ်။ ““ စိတ်ချ ဘာမှမဖြစ်စေရဘူး ဒါအပျိုမှေးပေါက်လို့ထွက်တာ ”” သူ့ကိုဘော်လီချိပ်တပ်ပေး အင်္ကျီဝတ်ပေး ထဘီဝတ်ပေးပြီးတာနဲ့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ပစ်္စည်းတွေ ကောက်ပြီး သူ့ခေါ်ရာနောက်ကို အသာလိုက်လာပါတယ်။ သူ့ခါးကလေးကိုတော့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ သိုင်းဖက်လို့ပေါ့။တဖြေးဖြေးနဲ့ မီးရောင် မှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ် လမ်းလေးတစ်ခုထိ ရောက်လာပါတယ်။ အိုဗျာ ကောင်းကင်ကြီးဟာ အစအဆုံးမရှိပဲဖြစ်နေသလို ဒီတဲလေးဟာလည်း ကွင်းပြင်ကျယ် ပန်းစိုက်ခင်းကျယ်ကြီးထဲမှာပါ့ဗျာ။ အဲ့ဒီစိုက်ခင်းကျယ်ကြီးထဲမှာ တဲကလေးက ထီးထီးတည်းဖြစ်နေတာ အိပ်မက်ကမ်္ဘာထဲ ရောက်နေသလိုပါပဲလား။
““ မမရေ မမ အောင်ဇေ အောင်ဇေ အိပ်ပြီလား ဒေါ်လေးကို တံခါးဖွင့်ပေးပါအုံး ”” ““ ဟဲ့ ညီမလေး နောက်ကျလှချည်လား သူကကော ဘယ်ကလဲ လာလာ မိုးချုပ်လှပြီ မမဖြင့် စိတ်ပူလိုက်ရတာ ”” ““ လမ်းမှာ လမ်းသူရဲ ကလေကချေတွေလိုက် နှောက်ယှက်လို့ ဒီက အကိုကလိုက်ပို့ပေးတာပါ မမရယ်။သူသာမကယ်ရင် ကျမဘဝတော့ဒုက်္ခပဲ ”” ကောင်းပါ့ဗျာ တော်တော်လိုက်တဲ့ ချိုချို ။““ အော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ကျမညီမလေးက ညပိုင်းအထိ ဇွဲနဲ့ဈေးရောင်းတော့ တနေ့ဒါမျိုးဖြစ်မယ်ထင်သားပဲ ကျေးဇူးပဲရှင် ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး ”” စကားလည်းပြော မျက်လုံးကလဲ ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံးကို နေရာအနှံ့လိုက်ကြည့်နေတယ်။သူကလဲသူ့ညီမလို မိန်းမချောပဲ။ သူ့ညီမထက်တောင် ဘော်ဒီကောင်းသေး နို့ကြီးတွေက ဘရာဇီယာမပါပဲ အင်္ကျီအောက်မှာ ကြွားကြွားရွားရွား တင်ပါးကြီးတွေက ကားထွက်နေလေရဲ့ သူ့အရပ်ကလဲ သူ့ညီမထက်ပိုမြင့်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ခလေးအမေထင်တယ် သူ့ဘေးမှာ ၅နှစ်အရွယ် သူ့ရုပ်မျိုးနဲ့ ချာတိတ်တစ်ကောင် ရပ်နေတယ်။
““ မမ အစ်ကို့ကို ထမင်းပါအုံး ဆာရော့မယ် ကျမရေချိုးလိုက်အုံးမယ် ”” ““ ဟုတ်သားပဲ မေ့နေလိုက်တာ လာ လာ ဒီမှာထိုင် ”” ““ နေပါစေ ကျွန်တော်မစားဘူး အခုပြန်မှာ ”” ““ မစားရင် မခေါ်ဘူးနော် အစ်ကို လမ်းမှာတော့ ချိုချို ချိုချိုနဲ့ အခုသူများကျွေးတာကျ မစားရင် နောက်လမ်းမှာတွေ့တောင် ရှောင်သွားမှာ ”” ““ ကဲ ကဲ စားပါမယ်ဗျာ အော်. ဒါနဲ့ အစ်မကြီး ”” ““ ရှင် ပြောပါ ”” ““ ထမင်းများများ ထည့်ခဲ့ပါ ”” ကျွန်တော်တို့ စားရင်းသောက်ရင်း စကားပြောရင်းနဲ့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ် မသိဘူး။ ဟိုအဝေးဆီက လွင့်လာတဲ့ (၁၁)နာရီသံချောင်းခေါက်သံကြောင့် သုံးယောက်သား မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်။ ““ ဟဲ့တော့(၁၁)နာရီထိုးပြီ ဒုက်္ခပဲ မမရေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ”” ““ ဒီမှာပဲအိပ်ပေါ့ ဒီအချိန် အပြင်ထွက်ရင်တော့ အဖမ်းခံရမှာပဲ ”” တိုတိုပြောရရင် ကျွန်တော်ကို သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ဘေးက အခန်းမှာ နေရာချပေးတယ်။ကြမ်းကမာတော့ တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်နိုင်ဘူး။ ဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်နဲ့ ည(၁)နာရီထိုးပါရော မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတဲ့ အခိုက်နူးညံ့ပျော့အိတဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် ကျွန်တော်လည်းလန့်နိုးသွားပြီ။
““ ဟင် မမ ပါလား ”” ““ ဟုတ်တယ် မောင်လေးရယ် မမ မနေနိုင်တော့လို့ မောင်လေးဆီလာခဲ့တာပါ။ မမကိုတော့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့နော် ”” မသေးပါဘူးခင်ဗျာ အဖြေပေးတဲ့ အနေနဲ့ ပြည့်ဖြိုးတဲ့ နှုတ်ခမ်းလွှာလေးကို ငုံ့ပြီး စုပ်ယူလိုက်တယ် အားပါး ဒီမိန်းမက သဘာပဲ ကျွန်တော်အာခေါင်ထဲကို လျှာထည့်ပြီးကလိပါလေရော လက်တစ်ဖက်ကလဲ အင်္ကျီကြည်သီးတွေ တစ်လုံးချင်းဖြုတ်ပြီး ရင်ဘတ်ကို ပွတ်လိုက် ရင်ဘတ်မွှေးတွေနဲ့ ကစားလိုက်နဲ့ ဖီးလ်တွေပေး နေတယ်။ကျွန်တော်လဲ သူ့အင်္ကျီကိုဟပြီး ထွားအိနေတဲ့ နို့အုံတွေကို အသာဆုပ်နယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နို့သီးတွေဟာ လက်သန်း တစ်ဆစ်လောက်ရှိမလား မသိ ကောင်းလိုက်တာ တရွေ့ရွေ့နဲ့သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်လီးဆီကို ရွှေ့ဆင်းလာပါရော။ ခေါင်းထောင်ချင်ချင်ဖြစ်နေတဲ့လချောင်းကို လက်နဲ့ ဆုပ်နယ်ပြီး အသာဂွင်းတိုက်ပေးနေပါတယ်။
အားကျမခံ စောက်ဖုတ်မို့မို့ကြီးကို အသာဆုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်ပေးသလို လက်ချောင်းတွေကလဲ စောက်ခေါင်းထဲဝင်ပါလေရော ကလေးတစ်ယောက် အမေသာဆိုတယ်။သိပ်မကျယ်ပါဘူး။ အနေတော်ပဲ အရည်တွေကလဲ ရွှဲလို့ ရမက်ပြင်းတဲ့မိန်းမပဲ။နှုတ်ခမ်းချင်းခွာထိုင်လိုက်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ လီးကြီးဟာ မြွေတစ်ကောင်လို ခေါင်းတလှုပ်လှုပ်နဲ့။ သူ့ခေါင်းလေးငုံ့ပြီးလီးဒစ်ကို ငုံလိုက်ပါတယ်။““ အိုး မမ မမ ကောင်းလိုက်တာဗျာ ကောင်းလိုက်တာ မမ ဟုတ်တယ်လျှာနဲ့ ထိုးပေး အား မမရယ် ”” ကျွန်တော်ရဲ့ အသံတိုးတိုးလေးဟာ မမကိုပိုမို လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ ပြောရအုံးမယ် သူ့နာမည်က ချိုရီတဲ့ဗျာ။ညီမနှစ်ယောက်လုံး ကျွန်တော့်အပေါ် ချိုကြပါပေတယ် ။ လီးကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ စုပ်ယူလိုက်တာ တစ်ခါထဲ လီးထိပ်က လရည်တွေဟာ ပိုက်နဲ့ကျသလို တဝေါဝေါ ဆင်းကျလာပါရော သူလဲ ရေငတ်တဲ့လူလို တကျိုက်ကျိုက်နဲ့ မြိုချလိုက်တယ်လေ။ လီးကြီးဟာ သေမသွားပဲ ဆက်တောင်နေတုန်းပဲ။ လီးကြီးဟာသေမသွားပဲဆက်တောင်နေတုန်းပဲ မမဟာ သူ့ထဘီကိုကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်ပြီး တောင်နေဆဲဖြစ်တဲ့လီးပေါ် ခွထိုင်ရင်း စောက်ခေါင်းထဲကိုစိုက်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
““ ဗြစ် ဗြစ် ဗြစ် ဒုတ် အင့် ”” လီးဟာ သိပ်မကျပ်ပေမယ့် သိပ်လဲမချောင်လှတဲ့ စောက်ခေါင်းထဲ အခက်အခဲမရှိဝင်သွားပေမဲ့ ရှည်တဲ့လီးမို့ သားအါမ်ကို သွးထောက်မိပါတယ်။ချိုရီတစ်ယောက် အင့်ကနဲခါဆင်းသွားပါလေရော။ ဒါပေမယ့် အရင်က အကျင့်ရှိပုံရတယ် မနားပဲ အသာကိုယ်ကိုကြွလိုက် နှိမ့်လိုက်နဲ့ ဆောင့်နေပါရော ။““ မမ မမ ကောင်းလိုက်တာ မမရယ် သိပ်ကောင်းတယ် မမကို ချစ်မိသွားပြီ နာနာဆောင့်လေ မမ ဘာလဲ သားအိမ်နာမှာ စိုးလို့လား ကျွန်တော်ရဲ့ သွေးထိုးပင့်ကော် စကားတွေကြောင့် ချိုရီဟာ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကိုလက်ထောက်အားယူရင်း နို့ကြီးတွေလှုပ်ပြီး ပြုတ်ကျတော့မတတ် အားရပါးရ ဆောင့်ပေးပါတယ်။ ပါးစပ်ကလဲ တအင်းအင်းနဲ့ ခဏချင်းအတွင်းမှာပဲ နှစ်ယောက်လုံး ချွေးတွေရွှဲသွားပါတယ်။ သူကလဲဗျာ အရည်တွေကျပဲကျနိုင်တယ်။
ကျွန်တော့်လမွှေးတွေ စိုရွှဲပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလည်း အိုင်နေပြီ။ စောက်ခေါင်းက မချော်လို့သာပေါ့။ တဖြေးဖြေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ယူသလို နို့တွေနဲ့ ရင်ဘတ်ကို ဖိကပ်ထားပါတယ်။ လီးဟာသားအိမ်ကိုဒုတ်ကနဲဒုတ်ကနဲ ဆောင့်မိသလို သူ့နှုတ်ကလဲ တအင်းအင်းနဲ့ မောသံကြီးထွက်နေပါတယ်။ စောက်ခေါင်းဟာ လီးကိုရစ်ထားပြီး လီးဒစ်ကအသားနုလေးတွေဟာ သားအိမ်မှာ သွားဆာင့်တာကို တိုက်ချင်းပစ် ဒုံးပျံတီထွင်တဲ့ သိပ်္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်က သူ့ဒုံးပျံပစ်မှတ်ကိုထိရင်ဖြစ်မတဲ့ပီတိထက် ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ ပီတိကပိုမှာပါ။မကြာပါဘူး (၁၅မိနစ်ကျော်ပါတယ်) ချိုရီဟာ တအင်းအင်းနဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်တွေပန်းချလိုက်ပြီး ကျွန်တော်ကို ခွဖက်ပြီး တစ်ဖက်ကိုလှိမ့်ချလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အပေါ်ကိုရောက်သွားတော့တာပေါ့။အခုတော့ကျွန်တော်ဆောင့်ရမည့် အလှည့်ပဲ။ မိန်းမတို့ရဲ့ စိတ်က အတော်ဆန်းကျယ်သားဗျ။ အရုပ်လိုပဲ ကိုယ်ကလိုက်ရင်သူပြေး ကိုယ်ပြေးရင်သူလိုက်သကိုး။ အခုပဲကြည့်လေ မမျှော်လင့်ပဲ မုတ်ဆိတ်ပျားမှာ ပျားရောပိတုန်းရော စွဲတာ။ ဒူးကွေးပေါင်ကားပြီး ဖြဲပေးထားတဲ့ ချိုရီစောက်ဖုတ်ထဲကို ကျွန်တော့်လီးအဆုံးအထိနှစ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
““ အင်း ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ် သိပ်ကောင်းတာပဲ ”” ပြီးတော့လီးကို ဒစ်မြုပ်ရုံလေးချန်ပြီး ပြန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အံတစ်ချက်ကြိတ်လိုက်ပြီး စကဒ်ဒုံးကျည်တစ်လုံးလို အားနဲ့ဆောင်ံလိုက်တယ်။ ချိုရီရဲ့ သားအိမ်ကို ဒုတ်ကနဲ ဆောင့်ပြီး ချိုရီတစ်ယောက် ကုန်းတတ်သွားပါတယ်။ စောက်ခေါင်းထဲကလဲ ပြစ်နေတဲ့ အရည်တွေပွက်ကနဲ အံကျလာပါတယ်။ ဒီလို အချက်နှစ်ဆယ်လောက်လဲ ဆောင့်ပြီးရော ချိုရီစောက်ခေါင်းထဲကရော ကျွန်တော့်လီးပါ ပူလာပါတော့တယ်။ ဒီတော့ ခပ်မြန်မြန်လေးပြီးအောင် မြန်မြန်ပဲဆောင့်ပေးလိုက်တာ ချိုရီစောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေဟာ ကျွန်တော့်လီးကို သတ်္တဝါတစ်ကောင်လိုစုပ်ချလိုက်တော့။အမလေးဗျာ တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ သွေးတွေဟာ လီးထဲက ပန်းထွက်လာသလား အောက့်မေ့ရတယ်။ သုတ်ရည်တွေတလဟော ချိုရီရဲ့ သားအိမ်ကို အားရပါးရ ပန်းချလိုက်ပါတယ်ချို၇ီလဲအင်မတန်အားရတဲ့ပုံစံနဲ့ ဖင်ကြီးတွေကော့တက်ပြီး ကျွန်တော့်လီးကို သားအိမ်နဲ့ ညှပ်နိုင်သမျှ ညှပ်ထားပါတော့တယ်။ မောမောနဲ့ ချိုရီပေါ် ထပ်ကျညပီး မှိန်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ချိုရီက ပွတ်သပ်ပေးရင်း မျက်နှာ တစ်ပြင်လုံးနေရာလပ်မကျန်ရအောင် လျှောက်နမ်းနေပါတယ်။
““ မောင်လေး အိမ်ထောင်နဲ့လား ”” ““ ဟင့်အင်း လူပြို လူပျိုမဟုတ်ဘူးနော် ရရစ်နဲ့ ပြိုတဲ့ လူပြို ”” ““ မင်းလီးကြီးက သိပ်ကောင်းတာပဲကွယ် မမဖြင့် အခုထက်ထိတောင် စောက်ခေါင်းထဲမှာ အရသာတွေ့နေတုံးပဲ ”” ““ မမယောက်ျား ရော ”” ““ သူကဆုံးသွားပြီလေ မမလဲသူဆုံးကတဲက ဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှ မအိပ်ရ အခွင့်အရေးကလဲမရ ယောက်ျားလဲမတွေ့တော့ မမရဲ့စိတ်တွေကို အတင်းချုပ်ထားရတယ် အခေါင်းထဲမှာလည်းမခံနိုင်အောင်ယားလွန်းလို့ ငိုခဲ့ရတဲ့ ညတွေလည်း မနည်းဘူး ကွယ် အခုမောင်လေးနဲ့ အားရပါးရ လုပ်ကိုင်ရတော့မှ မမစိတ်တွေငြိမ်ရတော့တယ် မင်းနောက်ဆိုနေ့တိုင်းလာပေးနော် မောင်လေး ”” ““ ရှင်တော်တော် ယုတ်မာပါလား ဟင် ညီမကိုရအောင်ချိုင်ပြီးတော့ မမကိုပါယူတယ် ရှင်လူယုတ်မာ ဟင်း ဟင်း ဟင်း ”” ဟိုက် ဘယ်တုန်းက ချိုချို နိုးပြီး အနားရောက်လာတယ်မသိဘူး ကွိုင်ပဲ။
. ““ ဟဲ့ ညီမလေးနေအုံး ဒီကစ်္စဟာ သူဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူး မမစလို့ဖြစ်ရတာ မမလဲမနေနိုင်လွန်းလို့ သူကိုကပ်ရတာပါကွယ်။ နင်သူနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တယ်တာလဲ သိပြီးသား နင့်ထဘီမှာသွေးတွေပေပြီး နင်တို့နှစ်ယောက်အတူ လမ်းလျှောက်လာကတဲက နင်တို့ ကိစ်္စပြီးခဲ့မှန်းသိတယ်။ဒါကြောင့်လဲ ငါသူ့ကိုစည်းရုံးရဲတာပေါ့ ”” ““ ဟင် မမသိရက်နဲ့လုပ်တယ် ဟုတ်လား ရက်စက်လိုက်တာ မမရယ် မမလင်ယူပြီးတာတောင် သူများရဲ့ ”” ““ ဟဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ သဘောနဲ့ ခံစားချက်ကို နင်ကြီးမှသိလာမယ် ညီမလေးရယ် . ဟင်း သူတို့ပြောနေချိန်မှာ ကျနော်တိတ်တိတ် နေရင်း ၂ ၁ ဆွဲဘို့ စဉ်းစားနေပါတော့တယ်။ ပြီးပါပြီ